Wariye Farhan Ahmed oo lagu xiray Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Wariye Farhan Ahmed oo lagu xiray Dhuusamareeb
Mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa saakay xabsiga loo taxaabay isagoo ku guda jira tabinta bannaanbax ay cabasho ku muujinayeen qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Ciidamada Booliska Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb, ayaa dhowr saacadood maanta xabsiga ku hayay Wariye Farhan Ahmed Cabdi, oo ka tirsan Radio Galgaduud sidoo kalana wakiil wareed u ah muuqaal baahiyaha Universal TV.
Ciidamada Booliska ayaa Farxaan Xabsiga u taxaabay xilli ku howllanaa soo tabinta cabasho ay muujinayeen wadayaasha mooto-bajaajta oo isku soo bax ka sameynayay afaafka hore ee xarunta maamulka Degmada Dhuusamareeb.
Ururka Suxufiyiinta Somaliyeed (FESOJ) ayaa xaqiiqiyay in ugu danbayn Wariye Farhan Ahmed Cabdi, uu xoriyaddiisa dib u helay, kadib saacado uu jiray xabsiga xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada ka taagnaa cabashooyin la xariira taargada mootooyinka iyo canshuurta laga qaado, waxaana dhowr mar laga hor tagay isku soo bax ay qorsheeyeen wadayaasha bajaajta.